Glass Greenhouse, Multi-Span lamaqondo, Smart yiGreenhouse - Hanyang
Qingzhou Hanyang Greenhouse Project Co., Ltd sibangelwa Qingzhou Xianke Mechanical Device Co., Ltd ukuze ukukhawulelana neemfuno zophuhliso kwemveliso. Qingzhou Xianke Mechanical Device Co., Ltd yasekwa ngo-2010, kwaye iye zanikelwa ukuba yoyilo, uphando kunye nokuveliswa kwe lobunjineli gases kwaye nesanti machinery.After zemigodi iminyaka emininzi zophuhliso, imveliso zobungcali kunye nolwakhiwo, ngo-2016 inkampani lethu ancedisayo inkampani Qingzhou Hanyang lamaqondo Project Co., Ltd, Hanyang ezolimo ligxininisa kuyilo greenhouse, imveliso, ulwakhiwo, ngokulinywa inkonzo yasemva kwentengiso.
Le nkampani kuthatha indawo engaphezulu kwe 15000 square metres, kwaye umasifundisane nokuveliswa ebangela esithathwini-yendawo yonke. Le workshop nokuveliswa kufakwa izibonelelo epheleleyo kunye nesakhiwo ofisi acocekile kwaye icocekile. Ngoku le nkampani iye yamisela lisebe imveliso, isebe abasebenzi, isebe intengiso, R & isebe D, isebe uyilo, ukuthenga isebe kunye namanye amasebe. nabasebenzi be-ofisi ixesha elide ezinzileyo abantu kuma- 20, iinjineli zobugcisa-15, abasebenzi mveliso uzinzile ixesha elide kubantu abangaphezulu kwama-50, abasebenzi zokwakha abantu 108, uninzi singabasebenzi zobugcisa abanezakhono benza lo shishino iminyaka emininzi .
Emva kweminyaka emininzi yokusebenza kunye nophando, sisebenzisa Obusemagqabini ubunjani imveliso emva-iintengiso nkonzo ukuze aphumelele abathengi nokwakha iimarike basekhaya angaphandle izinzile. Ukuza kuthi ga ngoku, iimveliso zethu wathengisa ukuba ngaphezu kwe-30 kumaphondo, koomasipala, kunye nemimandla ezimeleyo, kwaye kuthunyelwe ngempumelelo Russia, India, South Africa, Vietnam, Bangladesh, Singapore, Nigeria, Kenya, Togo, Congo kunye namanye amazwe kunye nemimandla. Siye safumana iwonga kwihlabathi ngokubanzi kunye nolwalamano esekwe intsebenziswano ixesha elide kunye nabathengi ekhaya naphesheya.
Imveliso egqwesileyo, inkonzo arcade games, ixabiso lowset lo, HanYang uza intle ngaphezulu omzi wakho, siya kukuvuyela inkonzo kuwe, wamkelekile ukuya.